Category:Will of D | One Piece Wiki | FANDOM powered by Wikia
One Piece Series ထဲမှာ နာမည်အလည်မှာ D. ပါတဲ့ ဇာတ်ကောင်အချို့ပါဝင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ဆန်းကြယ်တဲ့ အလယ်စာလုံးကို “the Will of the D” လို့ခေါ်သလို “D’s will” လို့လည်း One Piece ထဲက ဇာတ်ကောင်များစွာကလည်း ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ တခြို့ဘာသာပြန်မှားယွင်းမှုတွေက ယခင် Pirate King ဟောင်း Gol D. Roger ကိုအစွဲပြုပြီး “Gol D’s will” လို့ညွှန်းဆိုထားကြပါတယ်။
Monkey Family ထဲက D. ပါတဲ့သူအားလုံး
D. တွေရဲ့ ဆန်းကြယ်မှု
ဇာတ်လမ်းထဲမှာ Dr. Kureha က ပထမဆုံး Will Of D ကို ပြောပြခဲ့တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို သူမကြောင့်ပဲ Pirate King Gold Roger ရဲ့ နာမည်အစစ်က Gol D. Roger ဖြစ်တယ်ဆိုတာ သိခဲ့ရတာပါ။ သူမက Chopper က အလွန်အန္တရာယ်များတဲ့သူနဲ့ ပူးပေါင်းမိပြီလို့ Dalton ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။
So it still lives… The will of D.
- Dr. Kureha က Luffy အကြောင်း Dalton ကိုပြောတုန်းက
The Will of D အကြောင်းဟာ Skypiea Arc မှာတုန်းကလည်း Ancient Belfry ကိုဆွဲတင်တုန်းက Robin ကို Gan Fall ပြောပြခဲ့ပါသေးတယ်။ Gan Fall က Luffy ဟာ Gol D. Roger လိုပဲ သူ့ကို စိတ်ထဲမှာ တူညီစွာ ထင်မှတ်ခံရစေပါတယ်။ သူက Robin ကို “It suits him to haveaname of just one letter.” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်း Robin က Silvers Rayleigh ကို Void Century အကြောင်းကို ပြောပြနေတဲ့အချိန်တုန်းက The Will of D ရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ Rayleigh က D က ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတော့ မပြောပြခဲ့ပေမယ့် သူတို့ Roger Pirates တွေက Void Century အကြောင်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူမကိုပြောပြဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာ Robin က သူ့ကမ်းလှမ်းချက်ကို ငြင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ Robin က အမှန်တရားကို သူမကိုယ်တိုင်ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ စိတ်သဘောတူခဲ့ပါတယ်။
တကယ်တမ်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် D တွေအားလုံးက တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဆယ်နွှယ်နေပါတယ်။ Luffy မှာ နာမည်ရင်း Monkey D. Grap ဖြစ်တဲ့ Vice-Admiral Grap က သူ့အဖိုးဖြစ်ပါတယ်။ Luffy ဟာ တော်လှန်ရေးသမား Monkey D. Dragon ရဲ့သားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Luffy ရဲ့ မွေးစားအစ်ကို Portgas D. Ace ကလည်း Gol d. Roger နဲ့ Portgas D. Rouge တို့နဲ့ သွေးချင်းဆက်နွှယ်နေပါတယ်။ Whitebeard ကလည်း D. ဆိုတဲ့စာလုံးပါတဲ့သူတွေရဲ့ အရှိန်အဟုန်ကို ငြိမ်းသက်ဖို့အတွက် D. မျိုးရိုးကို သတ်လိုက်တာက မဖြစ်နိုင်ကြောင်းပြောပြခဲ့သလို တစ်စုံတစ်ယောက်က အဲ့ဒါကို တစ်နေ့မှာ ပြန်လည်ယူဆောင်လာမှာပဲလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ Trafalgar Law က “What’s the Dark King thinking this time? The will of the ‘D’ will almost certainly call upastorm again.” လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်က “Dark King Rayleigh က အခုဘာကို စဉ်းစားနေတာလဲ? The will of the ‘D’ က နောက်တစ်ကြိမ် မုန်တိုင်းကိုခေါ်လာခဲ့ပြန်ပြီ” ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Will of D (Alive )
Monkey D. Luffy, Monkey D. Dragon, Monkey D. Garp နဲ့ Marshall D. Teach
အသက် 17 နှစ်အရွယ် Luffy က D. ပါတဲ့သူတွေထဲမှာ အငယ်ဆုံးဖြစ်ပြီးတော့ Monkey D. Garp ကတော့ D. ပါပြီး အသက်ရှင်တဲ့သူတွေထဲမှာ အသက်အကြီးဆုံးပါ။
- Monkey D. Luffy ( “Straw Hat Luffy” ) ကတော့ Straw Hat Pirates ရဲ့ Captain ပါ - Monkey D. Dragon ( “Revolutionary Dragon” ) က Revolutionaries တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ပါ - Monkey D. Garp ( “Garp the Fist” ) ယခင် Marine Vice Admiral ဟောင်းတစ်ယောက်ပါ - Marshall D. Teach ( “Blackbeard’ ) ကတော့ Whitebeard Pirates second division က အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်သလို Blackbeard Pirates Captain ပါ။ Shichibukai အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။
Will of D (Dead)
Gol D. Roger, Portgas D. Rouge, Portgas D. Ace နဲ့ Jaguar D. Saul
ဇာတ်လမ်းထဲမှာတော့ Roger ကအသက် 22 နှစ်အရွယ်မှာသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ Saul ကလည်း သေသွားတာ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ကြာနေပါပြီ။ Saul က Giant တစ်ယောက်ပါ။ အဲ့ဒါက ဇာတ်လမ်းထဲမှာ “man of D” တွေထဲက လူမဟုတ်တဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသူပါ။ Giant တစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် သူ့အသက်က 300 အထိနေလို့ရပါတယ် ( သာမန် Giant တစ်ယောက်ရဲ့ သက်တမ်းပါ )။ Rouge ကလည်း သေသွားတာ အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်ကြာနေပြီဖြစ်သလို D. ပါတဲ့ တစ်ဦးတည်းသော မိန်းကလေးပါ။
- Gol D. Roger ( “Pirate King” ) က Roger Pirates တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါကြောင့်သေတော့မယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်4နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာ အသတ်ခံဖို့ဆုံးဖြစ်တဲ့ပါတယ်။ - Jaguar D. Saul က ယခင် Marine Vice Admiral ဟောင်းပါ။ Marines တွေကို သစ္စာဖောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Vice Admiral Kuzan (Admiral Aokiji) ကသတ်ခဲ့တာပါ။ - Portgas D. Rouge က မိန်းမသားအဖြစ်နဲ့ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ “D” တစ်ယောက်ဖြစ်သလို Gol d. Roger ရဲ့ချစ်သူ နဲ့ Portgas D. Ace ရဲ့ မိခင်ပါ။ Ace က သူမရဲ့ သားအိမ်မှာ လပေါင်း ၂ဝ ကြာ ထိန်းသိမ်းထားခဲ့ရတဲ့အတွက် ကလေးမွေးမွေးပြီးချင်းမှာပဲ ဆုံးပါးသွားခဲ့ပါတယ်။ - Portgas D. Ace ( “Fire-Fist Ace” ) က Spade Pirates တွေရဲ့ Captain ဟောင်းဖြစ်သလို Witebeard Pirates တွေရဲ့ Second Division Commander ပါ။ နာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားတဲ့ Pirate King Gol D. Roger နဲ့ Portgas D. Rouge တို့ရဲ့သားပါ။ သူညီ Luffy ကာကွယ်တုန်းက Admiral Akainu ရဲ့သတ်တာကိုခံခဲ့ရပါတယ်။
"http://my.onepiece.wikia.com/wiki/Category:Will_of_D?oldid=157" မှ ရယူရန်